ဂူဂဲလ်ပိုင်းခြားစိတ်ဖြာမှု Analytics - subdomain ကိုမကူးပါနှင့် Martech Zone
ကျွန်ုပ်တို့၏ ၀ န်ဆောင်မှုအများစုသည် ၀ န်ဆောင်မှုပေးသူများအနေဖြင့်ဆော့ဝဲလ်များဖြစ်ကြပြီး ၀ ဘ်ဆိုဒ်နှင့်လျှောက်လွှာတင်သည့်ဆိုက်နှစ်ခုလုံးရှိသည်။ သင်၏ကွန်ရက်စာမျက်နှာအတွက်အကြောင်းအရာစီမံခန့်ခွဲမှုစနစ်၏လွယ်ကူချောမွေ့မှုနှင့်လိုလားမှုရှိလိုသောကြောင့်၎င်းနှစ်ခုကိုသီးခြားစီထားရှိရန်ကျွန်ုပ်တို့အကြံပြုသည်၊ သို့သော်သင်၏လျှောက်လွှာတွင်ပါရှိသောဗားရှင်းထိန်းချုပ်မှု၊ လုံခြုံရေးနှင့်အခြားပြissuesနာများကြောင့်မတားဆီးလိုပါ။ သို့သော်၊ သင်ကသီးခြားအကောင့်နှစ်ခုဖွင့်သောအခါဂူဂဲလ် Analytics သို့ရောက်သောအခါ၎င်းသည်ဘရိုရှာတွင်တစ်ခုဖြစ်သည်www.yourdomain.com) နှင့် subdomain ပေါ်တွင်အခြား (app.yourdomain.com) ။ အခြားဒိုမိန်းခွဲ (ဒိုမိန်းခွဲ) တွင်ပင်သင် helpdesk ရှိနိုင်သည်။support.yourdomain.com).
သင်၏အသုံးပြုသူများသည်သင်၏ပင်မစာမျက်နှာသို့မကြာခဏသွားပြီး app login သို့မဟုတ် support link ကိုနှိပ်ပါ တစ်တုံအဖြစ်ရေတွက် နှင့်သင်၏ skews analytics။ သုံးစွဲသူအခြေပြုကြီးမားသောကုမ္ပဏီများအတွက် ၄ င်းတို့သည်သူတို့စိတ်ဝင်စားသည့်သူတို့၏ဆိုက်သို့အမှန်တကယ်လည်ပတ်ခြင်းထက်များသောအားဖြင့်မောင်းနှင်မှုပိုမိုများပြားစေသည်။ အမှန်မှာ၊ ဂူဂဲလ် Analytics အကောင့်တစ်ခုမျှဝေခြင်းနှင့်ဆပ်ဒိုမိန်းကိုဖွင့်ခြင်းကဤပြissueနာကိုဖယ်ရှားပေးနိုင်သည်။ သို့သော်များစွာသောကုမ္ပဏီများသည်ရောနှောခြင်းမပြုလိုပါ analytics ၀ န်ဆောင်မှုပလက်ဖောင်းတစ်ခုအနေနဲ့သူတို့ရဲ့လက်ကမ်းစာစောင်နှင့်ဆော့ဖ်ဝဲများအကြား။
အဖြေကရိုးရိုးလေးပါပဲ။ အဲဒီဒိုမိန်းခွဲတွေဆီကိုအသွားအလာကို ဦး တည်စေတဲ့မီနူးလင့်ခ်ပေါ်ကအဖြစ်အပျက်တစ်ခုကိုခြေရာခံလိုက်ရုံပါပဲ။ တစ် ဦး ကတစ် ဦးaည့်သည်သင်၏ site ကိုရောက်ရှိခြင်းနှင့်သမျှနှင့်အတူအပြန်အလှန်မရှိသည့်အခါတစ် ဦး bounce ဖြစ်ပါတယ်။ ဖြစ်ရပ်တစ်ခုကတကယ်တော့အပြန်အလှန်ဆက်သွယ်မှုတစ်ခုပဲ။ ဒါကြောင့် visit ည့်သည်ကသင်၏ဆိုက်ကိုရောက်ရင်ဖြစ်ရပ်တစ်ခုဖြစ်ပေါ်စေမည့် link တစ်ခုကိုနှိပ်လိုက်ရင်သူတို့က bounce မပေးခဲ့ပါဘူး.
အဖြစ်အပျက်ခြေရာခံခြင်း အကောင်အထည်ဖော်ရန်လွယ်ကူသည်။ ကျောက်ချစာသားထဲမှာသင်ခြေရာခံချင်တဲ့အဖြစ်အပျက်ကိုရိုးရှင်းစွာထည့်ပါ။
အကယ်၍ သင်သည် WordPress ကိုအသုံးပြုပါကဤအရာအတွက်ကြီးမားသော plugin တစ်ခုရှိသည် - GA Nav မီနူးများကိုခြေရာခံ၎င်းသည်သင့်အားမီနူးတွင်အဖြစ်အပျက်ခြေရာခံခြင်းကိုသတ်မှတ်ရန်ခွင့်ပြုသည်သို့မဟုတ်၎င်းသည်လုံးဝအပြန်အလှန်အကျိုးသက်ရောက်မှုမရှိစေရန်အကွက်တစ်ခုကိုနှိပ်ပါ။
Tags: ရုတ်တရက်ခုန်လွှားအဖြစ်အပျက်ခြေရာခံခြင်းanalytics googlesubdomainချစ်သူwordpress plugin ကို
ဇွန်လ 14 ရက် 2014 ခုနှစ် နံနက် 8 နာရီ 58 မိနစ်
နောက်ထပ်ကောင်းတဲ့ Post Doug!! မျှဝေလို့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်..
ဇွန်လ 15 ရက် 2014 ခုနှစ် နံနက်9နာရီ 56 မိနစ်